Singobani-i-NBC Electronic Technologic Co, Ltd.
Ngamava angaphezulu kweminyaka eli-12 kwizinto ze-electroacoustic ze-hardware, iinkonzo zethu zibandakanya uyilo, izixhobo, ukunyathela isinyithi, i-Metal Injection Molding (MIM), i-CNC processing, kunye ne-laser welding, kunye nokugqitywa komphezulu njengokutshiza ukutshiza, i-electroplating, kunye nomzimba Ukufakwa komphunga (PVD). Sinikezela ngemithombo eyahlukeneyo yemithombo yebhanti yentloko, izilayida, ii-caps, iibakaki kunye nezinye izinto zekhompyuter ezenziwe ngezixhobo ze-headphone kunye neenkqubo zomsindo, ezikumgangatho ophezulu kunye nokuqinisekisa ukuthembeka.
Njengenkampani yobuchwephesha obuphezulu kunye nophuhliso oludibeneyo lwemveliso, ukuvelisa, kunye nokuvavanya, i-NBC inakho ukubonelela ngezisombululo ezigqibeleleyo. Sinamalungelo obunini angama-40 + kunye nepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Izihlanganisi zethu ezipheleleyo zamandla ombane, ukusukela kwi-1A ukuya kwi-1000A, zigqithile kwizitifiketi ze-UL, CUL, TUV, kunye ne-CE, kwaye zisetyenziswa kakhulu kwi-UPS, umbane, unxibelelwano ngomnxeba, amandla amatsha, izithuthi, kunye nezicelo zonyango. Sikwabonelela ngokuchanekileyo okuphezulu okwenziwe ngezixhobo kunye neenkonzo zokuhlanganisa intambo ukujongana neemfuno zabathengi.
I-NBC ikholelwa kwifilosofi yeshishini "yemfezeko, inyanzeliso, eluncedo macala onke, kunye nokuphumelela". Umoya wethu "ezintsha, intsebenziswano, kwaye silwele eyona" ukunika abathengi kunye arcade games nexabiso kukhuphiswano. Ukongeza ekugxileni kwitekhnoloji yokuyila kunye nomgangatho wemveliso, i-NBC nayo iyazinikezela kwiinkonzo zoluntu nakwintlalo yoluntu.